विद्यासुन्दरले खुलामञ्च भत्किएको चाल पाएनन् ! कांग्रेसकी उपमेयरले खोलिन् राज::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
विद्यासुन्दरले खुलामञ्च भत्किएको चाल पाएनन् ! कांग्रेसकी उपमेयरले खोलिन् राज
मिडिया डबली प्रकाशित : शनिबार, बैशाख १४, २०७६
काठमाडौं – खुलामञ्च कब्जा गरेर बनाइएका संरचना सटरहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले डोजर लगाएर हटाइदिएको छ । काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले माथिको आदेशभन्दै खुलामञ्चमा कब्जा गरेर बनाइएका टहर भत्काइदिएका हुन् ।
जस्तापाताले बारेर बसाइएका सटरमा डोजर लगाउन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्य आफै मैदानमा उत्रिएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले सटरहरू भत्काएपछि मात्रै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य आएका थिए । आफ्नो विरोध हुने देखेपछि कार्यक्रम छ भन्दै खुलामञ्चबाट बाहिरिएका थिए ।
मेयर शाक्य गएको केही समयपछि उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ टहरा भइएको ठाउँमा आएकी थिएन् । टहरा भत्काएको आक्रोशमा पसल सञ्चालकहरूले उपमेयर खड्गीलाई आक्रमणको प्रयास गरेका थिए । सुरक्षाकर्मीहरूले उनलाई सुरक्षित स्थानतर्फ पठाएका थिए ।
मेयर शाक्यले शुक्रबार मात्र उपमेयर खड्गीलाई खुलामञ्चबारे अनुगमन गरेर रिपोर्ट पेश गर्न पत्र दिएका थिए । उपमेयर खड्गी खुलामञ्च अतिक्रमण भएका बारेमा आइतबार छलफल राखेको बताइन् । छलफल गर्नु अगाडि नै कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको निर्देशनमा डोजर लगाएर टहरा र सटर भत्काइएको छ ।
टहरा र सटर भत्काउन काठमाडौंका मेयर शाक्यले आदेश नदिएको उपमेयर शाक्यले बताइन् । ‘माथिबाट आदेश आएपछि डोजर चलाएको जानकारीमा आएको छ’, उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको आदेशमा टहरा र सटर भत्काइएको छ ।’
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले पनि माथिको आदेशमा महानगरसँग मिलेर सटर र टहराहरू भत्काइएको बताएका छन् । शाक्य पूर्वएमाले निकटका हुन् भने खड्गी नेपाली कांग्रेस निकटकी हुन् ।
नेविसंघले गर्यो सडक संघर्षमा उत्रिने घोषणा, यस्ता छन् कार्यक्रम तालिका
यातायात मन्त्रीको कार्यले आजित बने पराजुली, दिए यस्तो दनक !
अन्ततः एक्लिए ओली, कांग्रेस र राजपाको समर्थनमा नेकपाकै साथ् !